Ngwa Visa nke India | Ngwa Visa India | India Visa Online
India Visa maka ndi America
India Visa maka ụmụ amaala Britain
India Visa maka ụmụ amaala Canada
India Visa maka ụmụ amaala Australia
India Visa maka Citizensmụ Amaala France
Mba ndị ọzọ »
Ihe choro Visa ndi India
Nchoputa Visa ogwu nke India
Ogwe ntinye ikike
Ogwe ọpụpụ ọpụpụ nke Ọpụpụ
Ndị njem ụgbọ mmiri
Chọrọ Visa site na Paspọtụ
Citizensmụ amaala Britain
Citizensmụ amaala America
Citizensmụ amaala Australia
Ndị njem nleta Visa
Onye Nleta Ahụike Visa
ISIOKWU NDỊ DỊ N'IME YA
Nweta India Visa Online
Gịnị bụ India Visa Ngwa
Visa On abịa
Usoro Visa -
Ndị Njem Visa Ndị Ahịa
Ndụmọdụ iji zere iju Visa
Chọrọ foto Visa
Iwu Visa Passport
Itinye akwụkwọ maka Visa si USA
Visa ndị India maka ụmụ amaala Britain
Ribata na ọdụ ụgbọ elu Delhi
Ihe ederede »
Visa ndị njem nlegharị anya India na -emepe
Mmelite amụma Visa India
Weghachite Visa Online nke India
Visgba Ọbịa nke Ndị India
Ndepụta nke Ndị Ọrụ Etiti India
Ndị Ofesi Ofesi Ofesi na India
Iwu Visa maka OCI
Iwu Visa na .mụaka
Họrọ asụsụEnglishFrenchGermanItalianJapanspanishNorwegianDanishDutchSwedishPolishFinnishGreekRussianChinese (Simplified)arabicBulgarianKatalanChinese (Omenala)CroatianCzechFilipinoHibruHindiKoreanPortugueseRomanianIndonesianLatvianLithuanianSerbianSlovakSlovenianUkraineVietnameseAlbanianEstonianGalicianHungarianMalteseThaiTurkishPersianAfrikaansMalaySwahiliIrishWelshBelarusianIcelandicMasedoniaYiddishArmenianAzerbaijaniBasqueGeorgianHaitian CreoleUrduBengaliBosniaCebuanoEsperantoGujaratiHausaHmongigboJavaneseKannadakhmerLaoLatịnMaoriMarathiMongolianNepaliPunjabiSomaliaTamilTeluguYorubaZuluMyanmar (Burmese)ChichewaKazakhMalagasyMalayalamSinhalaSesothoSudaneseTajikUzbekAmharicCorsicanFrisianHawaiianKurdish (Kurmanji)KyrgyzLuxembourgishPashtoSamoanScottish GaelicShonaSindhiXhosa
Njehie emeela, biko nwaa ọzọ.
«Nkeji edemede mbu Isiokwu na-esote »
Gịnị bụ Ngwa Visa India?
Gọọmentị India chọrọ ka ụmụ amaala mba ọzọ niile na-achọ ịbanye India, nyefee ngwa Visa India. Enwere ike ime usoro ntinye akwụkwọ anamachọihe a site na nleta anụ ahụ na ndị nnọchi anya ndị India ma ọ bụ site na imecha Ngwa Visa India na ntanetị na weebụsaịtị a.
Ngwa Visa nke India bụ mmalite nke usoro iji nweta nsonaazụ maka mkpebi Visa India. Mkpebi Visa nke India n'ọtụtụ ikpe dị mma maka ndị na-achọ akwụkwọ.
Needsnye kwesịrị mezue Ngwa Visa India?
Ndị ọbịa ahụ na-abịa India dịka ndị ọbịa, ma ọ bụ maka ebumnuche azụmaahịa ma ọ bụ maka ọgwụgwọ ọgwụ nwere ike itinye akwụkwọ na ntanetị nke Visa Indian na ntanetị wee bụrụ ndị a ga-atụle maka ịbanye India. Emecha Ngwa Visa India n'onwe ya anaghị enye ịbanye n'ime India ozugbo.
Ndị ọrụ mbata na ọpụpụ nke gọọmentị India họpụtara na-ekpebi nsonaazụ nke Visa India nke India dabere na ozi nke ndị na-achọ akwụkwọ na ndenye nyocha ha dị n'ime.
Ndị njem na India na-abịa n'okpuru 1 nke Describeddị Visa akọwapụtara ebe a Ikwesiri iji mezue Visa Ngwa India.
Ngwa Visa Indian na ntanetị ma ọ bụ eVisa India dị n'okpuru ndị a sara mbara:
Visa eTourist nke India
India Visa eBusinss
Visa eMedical nke India
India eMedical Anya Visa
Kedu ozi achọrọ na ngwa Visa Indian?
Itselfdị n’onwe ya zuru oke ma dịkwa mfe iji mezue n’ime nkeji ole na ole. Onwere ihe omuma a choro n’aka ndi choro n’okpuru uzo edemede ndia:
Ihe omuma banyere ndu nke onye njem.
Nkọwa nke mmekorita.
Akụkọ banyere mpụ gara aga.
Achọrọ nkọwa ndị ọzọ dabere na ụdị visa ahụ.
A na-ajụ foto ihu na paspọtụ ikike mgbe akwụchara ụgwọ ahụ.
Kedu mgbe m ga-emezue Ngwa Visa India?
Ị ga-emecha ngwa Visa India opekata mpe ụbọchị 4 tupu ntinye gị na India. Visa maka India nwere ike were ụbọchị 3 ruo 4 maka nkwado, yabụ ọ dị mma itinye ụbọchị azụmaahịa 4 tupu ịbanye India.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wuchaa Ngwa Visa Indian?
Nweta ngwa Visa India 3-5 nkeji iji mezue tupu ịkwụ ụgwọ ịntanetị. Mgbe ugwo zuru ezu, dabere na obodo onye na-arịọ arịrịọ na ebumnuche nleta, enwere ike ịrịọ onye na-arịọ arịrịọ maka ozi ndị ọzọ.
E mechakwara ozi mgbakwunye a n'ime 2-3 nkeji. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na imecha ngwa n'ịntanetị, ị nwere ike ịkpọtụrụ Desk Help na Nkwado Ndị Ahịa na webụsaịtị a site na iji Kpọtụrụ Anyị njikọ.
Kedụ ihe ndị achọrọ ma ọ bụ ihe ndị achọrọ maka imecha Ngwa Visa India na ntanetị?
a) Paspọtụ ma ọ bụ obodo achọrọ:
Ị ga-abụrịrị nke 1 nke mba tozuru etozu nke Gọọmentị India na-anabata eVisa India tozuru oke.
b) Nzube chọrọ:
Ihe ọzọ achọrọ maka imezu ngwa Visa India n'ịntanetị na-abịa maka 1 n'ime ebumnuche ndị a:
Nleta maka ebumnuche nke Njem nleta, Nzuko ezinaụlọ na ndị enyị, Mmemme Yoga, ịhụ ụzọ, ịhụ ọrụ Volunteer Short.
Mbata maka njem azụmahịa na azụmaahịa, ịre ahịa na ịzụ ahịa nke ihe dị mma ma ọ bụ ọrụ, iduzi ije, ije nzukọ, egwuregwu, nzukọ ọmụmụ, ọgbakọ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ.
Ngwọta ahụike nke onwe ya ma ọ bụ ime dị ka onye Nlekọta Ahụike maka onye ahụ na-anara ọgwụgwọ.
ch) Ihe ndi ozo choro:
Ihe ndi ozo choro tupu mezue Ngwa Visa India na intaneti bu:
Paspọtụ nke dị irè maka ọnwa 6 na oge nke ịbanye India.
Paspọtụ nwere 2 ibe oghere ka onye ọrụ mbata na ọpụpụ nwere ike tee ya stampụ n'ọdụ ụgbọ elu. Mara, na Visa India ewepụtara mgbe emejuchara ngwa Visa India n'ịntanetị anaghị achọ ka ị gaa na ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya India maka itinye stampụ Visa. 2 Achọrọ ibe oghere na ọdụ ụgbọ elu maka ntinye na ọpụpụ stampụ na paspọtụ gị.
NJ email adabara.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ dịka nlele, kaadị debit, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ Paypal.
Enwere m ike ịdefee otu ma ọ bụ ezinụlọ India Visa Application?
Ngwa Visa nke India, n'agbanyeghị ọnọdụ mmecha, ma ọ dị n'ịntanetị ma ọ bụ na ọfịs India, ọ dị mkpa ka emechaa ya maka onye ọ bụla iche n'agbanyeghị afọ ole ha dị. Onweghi otu mpempe akwụkwọ Visa Indian nke dị maka usoro ntanetị ma ọ bụ nke na-anọghị n'ịntanetị.
Biko rịba ama na ị ga-etinye akwụkwọ maka onye ọ bụla na paspọtụ nke ha, yabụ ịmụmụ nwa na-enweghị ike ịga njem paspọtụ nke nne na nna ha ma ọ bụ onye nlekọta.
Kedu ihe ga - eme ma emechaa akwụkwọ Visa Indian?
Mgbe etinyere akwụkwọ anamachọ Visa nke India ọ na-aga n'ihu ịhazi ọrụ na Gọọmentị India. Enwere ike juo ndị njem ajụjụ ọzọ ma ọ bụ dokwuo anya maka njem ha ma ọ bụ enwere ike ịnye ha Visa Indian na-enweghị nkọwa ndị ọzọ.
Offọdụ n'ime ajụjụ a na-ajụkarị metụtara ebumnuche nke njem ahụ, ebe ọnụnọ, ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ akwụkwọ na India.
Kedu ihe dị iche n'etiti ngwa Visa Online na akwụkwọ Ngwa?
Ọ dịghị ihe dị iche n'etiti 2 usoro ma e wezụga n'ihi na ole na ole obere iche.
Ngwa Visa Indian nke Online bụ naanị maka ọnụnọ kachasị nke ụbọchị 180.
Ntanetị Visa Indian nke Online gbara akwụkwọ maka Visa Nleta bụ nke kachasị afọ 5.
A na-anabata Indian Visa Online Online maka ebumnuche ndị a:
Njem gị bụ maka ntụrụndụ.
Njem gị bụ maka ịhụ ụzọ.
Na-abịa izute ndị ezinụlọ na ndị ikwu gị.
Na-aga India izute ndị enyi.
Na-aga Yoga Mmemme / e.
Na-aga ihe ọmụmụ agaghị agafe ọnwa 6 na oge anaghị enye asambodo ma ọ bụ asambodo diplọma.
Are na-abịa ọrụ afọ ofufo ruo ọnwa 1 na oge.
Ebumnuche nke ọbịbịa gị iji wuo ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Na-abịa ịmalite, ikpezi, mezue ma ọ bụ gaa n'ihu na azụmaahịa.
Nleta gị bụ maka ịre otu ihe ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa na India.
Productchọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ si India wee chọọ ịzụ ma ọ bụ zụta ma ọ bụ ịzụta ihe si India.
Chọrọ itinye aka na azụmaahịa.
Ikwesiri iku ndi oru ma obu mmanu si India.
Na-aga ngosi ma ọ bụ mmemme ahia, ihe ngosi azụmaahịa, mkpọsa azụmahịa ma ọ bụ nzukọ azụmahịa.
Are na-eme dị ka onye ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara maka ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ na-aga n'ihu na India.
Chọrọ iduzi njegharị na India.
Nwe ego ị ga-ere na nleta gị.
Na-abịa maka Ọgwụ ma ọ bụ soro onye ọrịa na-abịa maka ọgwụgwọ.
Ọ bụrụ na ebumnuche njem gị abụghị nke 1 nke dị n'elu, ị ga-ede akwụkwọ dabere na ngwa Visa Indian nke na-agwụ ike na ogologo oge.
Kedụ uru ị ga-eji mezue Indian Visa Ngwa n'ịntanetị?
Uru otu ngwa Visa Indian na ntanetị bụ ndị a:
A na-ezigara Visa ozi email site na elektrọnik, ya mere aha eVisa (Visa elektrọn).
A na-ajụ nkọwa na ajụjụ ndị ọzọ site na email ma ha anaghị achọ ajụjụ ọnụ na Emblọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Indian ma ọ bụ Consulate
Usoro ngwa ngwa ma gwụchaa n'ọtụtụ oge n'ime awa 72.
Youkwesịrị ịga leta ndị ọrụ nnọchi anya India mgbe ị gụsịrị akwụkwọ Visa India na ntanetị?
Mba, achọghị gị ka ị gaa n’ọrụ ndị nnọchianya Indian ma ọ bụ Indian High Commission mgbe ị gụchara akwụkwọ Visa Indian na ntanetị.
Eletrọnik Indian Visa nke a ga-enye gị, ga-edekọ ya na sistemụ kọmputa. Achọrọ ka ị debe otu mpempe dị nro na ekwentị gị ma ọ bụ bụrụ na batrị ekwentị gị anwụọ, ọ bara uru idowe akwụkwọ mbipụta akwụkwọ Vital India gị ma ọ bụ eVisa India. You nwere ike ịga ọdụ ụgbọ elu mgbe ị nwetasịrị Indian eVisa.
Kedu otu a ga-esi kwụọ ụgwọ maka ngwa Visa Indian n'ịntanetị?
E nwere ihe karịrị ụlọ ego 133 anabatara na webụsaịtị a. Nwere ike ịkwụ ụgwọ ntanetị, ma ọ bụ site na ndenye ego na obodo ụfọdụ, site na Debit Kaadị, Kaadị Efu ma ọ bụ Paypal.
Kedu mgbe I ghaghị itinye akwụkwọ maka ngwa Visa Indian na ntanetị?
Enwere ọnọdụ ebe ị tozuru n'okpuru njirisi abụọ ahụ mana enwere ike ịnweghị ike ịnweta akwụkwọ eVisa India ma ọ bụ Indian Online visa ma ọ bụrụ na ihe dị n'okpuru emetụta gị.
Na-etinye akwụkwọ n'okpuru paspọtụ diplọmaị kama ịnwe paspọtụ nkịtị.
I bu n’obi ime ihe ndi oru akuko ma obu ime fim n’India.
Na-abịa maka ikwusa ozi ọma ma ọ bụ ọrụ ozi ala ọzọ.
Are na-abịa nleta ogologo oge karịa ụbọchị 180.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a metụtara gị, ị ga-etinye akwụkwọ maka akwụkwọ maka akwụkwọ / agba akwụkwọ maka India oge niile site na ịga na Ọdụ Indianlọ Ọrụ Indian / Consulate kacha nso ma ọ bụ Indian High Commission.
Kedu ihe mgbochi ndị India Visa Ngwa n'ịntanetị?
Ọ bụrụ n ’iru eru maka eVisa India ma kpebie imeju akwụkwọ anamachọ nke Visa India, mgbe ahụ ịkwesịrị ịma gbasara adịghị ike gị.
Visa India nke a ga-enye gị mgbe emechara ngwa Visa India ma ọ bụ ngwa eVisa India dị naanị maka oge 3 maka ebumnuche ndị njem, ụbọchị 30, afọ 1 na afọ 5.
Ngwa Visa ntanetị nke India ga - eme ka ị nweta azụmahịa Visa maka India nke bụ maka otu oge nke 1 Afọ na ntinye ọtụtụ.
Visa ahụike enwetara site na Ngwa Visa Indian Online ma ọ bụ eVisa India dị maka ụbọchị 60 maka ebumnuche ahụike. Ọ na-enye ohere ntinye 3 na India.
Ngwa Visa Ngwa nke India nke na-enye gị India eVisa, ga-ahapụ gị ya amachibidoro setịpụrụ ọdụ ụgbọ mmiri site n'ọdụ ụgbọ elu, Ọdụ ụgbọ elu 28 na ọdụ ụgbọ mmiri 5. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga India n'ụzọ, mgbe ahụ ịgaghị etinye akwụkwọ maka visa na India site na iji weebụsaịtị a na-eji usoro ntanetị ntanetị nke India Visa.
eVisa India enwetara site na imeju Ngwa Visa Indian n'ịntanetị erughị eru maka ịga na mpaghara ọgbakọ ndị agha. Ikwesiri itinye maka ikike Mpaghara echekwara na / ma ọ bụ ikike mpaghara amachibidoro.
Visa eletrọnịkị maka India bụ ụzọ kachasị ọsọ iji banye India ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem ụgbọ mmiri ma ọ bụ ikuku. Ọ bụrụ n’inwe otu n’ime mba 1 eVisa India tozuru oke ma kwuo ebumnuche dị ka akọwara n’elu, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka India Visa n'ịntanetị na webụsaịtị a.
Gbaa mbọ hụ na inyochare nke a ntozu gị India eVisa.
Citizensmụ amaala United States, Kingdommụ amaala United Kingdom, Citizensmụ amaala Canada na Citizensmụ amaala France nwere ike tinye ntanetị maka India eVisa.
Biko tinye akwụkwọ maka Visa India 4-7 tupu oge ụgbọ elu gị.
Ngwa eVisa India
Ejiri kọmputa nzuzo na nchekwa nzuzo nke nzuzo site na nzuzo
IHE NDỊ BAỊBỤL
MGBE NDỊ APPLICATION
eVISA ELIGIBILE MBUOMA
EGO NA-EKWU OKWU
eVISA IGBO EKPERE
IGBO VISA PISA
EGO NA-EGO ANWETA EGO
Ozi ndị ọbịa
NDBỌTA VBỌCH V VISA
MARA VISA MARA EGO
Ihe ị ga-eme iji zere ntụgharị uche VISA
Azụmahịa VISA TRAVELERS
EVISA AKPỌ EGO
Megharịa INDIA eVISA
Denye akwụkwọ maka eVISA SITE USA
Ihe amaala ndị India mara mma
BANDHARVGARH PARK PAL
ALA NKE CHINEKE KERALA
IHE NDỊ A GA -ECHICHE INDIA
Ekwesịrị ịhụ saịtị UNESCO HERITAGE
Ịgba egwu ndị India ama ama
ỤFỌDỤ ndị India ama ama
Nleta TAJ MAHAL
Zuru ezu ndu
RAJASTHAN NWA ANYA
Northeast East India
MUSSOORIE NA ARUNACHAL
INI IGBO NA MUSSOORIE
MUMBAI TRAVEL GUJI
UMU IGBO TAMIL NADU
Agwaetiti ANDAMAN & NICOBAR
Nduzi njem nleta na MEGHALAYA
GA-AHỤTA SOUTH INDIA
TRkwụ ụgwọ nsogbu
© nwebisiinka site na www.indiavisa-online.org
Nkwakọba: Visa India nke webụsaịtị azụmahịa a nyere bụ etinyere ya ozugbo na gọọmentị mbata na ọpụpụ India. Gọọmentị India ahọpụtabeghị www.indiavisa-online.org ozugbo, na-apụtaghị ìhè ma ọ bụ naanị. A na-ana ụgwọ ọkachamara maka ọrụ anyị yana levy nke gọọmentị maka ndị na-etinye akwụkwọ na webụsaịtị a.